Wararka - Noocyada Kala duwan ee Dharka Xariirta
Noocyada kala duwan ee Dharka Xariirta
Haddii aad tahay qof jecel muraayadaha raaxada leh, waxaad la sheekaysan doontaa xariir, fiber dabiici ah oo xoog leh oo ka hadlaya raaxada iyo fasalka. Sanado badan, alaab xariir ah ayaa hodanku u adeegsadeen inay ku muujiyaan fasalka.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah alaabada xariirta oo ku habboon adeegsiga kala duwan. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah silme charmeuse, oo sidoo kale loo yaqaan satin xariir. Dharkan wuxuu ugu fiican yahay tolidda dharka sida dharka dhogorta leh, blouses dabacsan, shaati -gacmeedka, garbasaarrada, iyo kimono oo leh xariir xariir ah. Waa mid fudud oo jilicsan oo leh dhinaca midig oo dhalaalaya.
Nooc kale oo ah alaab xariir ah oo la heli karo waa chiffon; xariirkani waa mid khafiif ah oo nus-hufan. Waxay ku habboon tahay xargaha, garbasaarrada, iyo blouses waxayna bixisaa muuqaal xarrago leh oo sabayn ah.
Waxaa ku xiga Georgette; maradaan waxaa loo isticmaalaa xirashada aroosyada iyo goonnada fiidka; waxaa lagu tolan karaa qaabab kala duwan oo dhar ah sida olol, xarriiq, ama dhar duub. Ugu dambeyntii, fidinta waa dhar kale oo xariir ah oo loo isticmaalo soo saarista jaakadaha, goonnada, iyo dharka. Sidoo kale waa mid miisaankeedu yar yahay oo leh shaati qurux badan.
Nooca ugu fiican ee marada ee la doorto marka la soo saarayo barkimooyin xariir ahwaa 100% sharaab mulberry saafi ah. Dharkan waa mid jilicsan oo dhalaalaya; waxay leedahay sifooyin keenaya nasasho iyo hurdo fiican habeenkii.
Bajaamooyinka xariirta ah, waa inaad doorataa satinka Crepe, kaas oo neefsan kara oo raaxo badan. Hooyada caadiga ah caadi ahaan waa 12mm, 16mm, 19mm, iyo 22mm. Markaa 30mm waa doorashada ugu habboon.
Maaskarada indhaha ee xariirta ah, maaddada ugu fiican waa xariir mulberry. Waxay leedahay meel sibiq ah. Waxay yareysaa cadaadiska, waxay dejisaa muruqyada, waxay abuurtaa jawi hurdo oo wanaagsan, waxay baabi'isaa faragelinta, waxayna ka caawisaa daboolidda ilayska indhaha.
Waqtiga dhejinta: Sep-08-2021